PK Converter for Android
Rated 4.95/5 (21) — Free Android application by PIKAY
About PK Converter
- ကူးယူထားသော မည်သည့် စာကို မဆို ယူနီကုတ် စနစ်ဖြင့် (သို့) စံမညီသော ဇော်ဂျီဖောင့်ဖြင့် ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
- မိမိ ရိုက်ထားသော စာကို ပုံအဖြစ်သို့လည်း အလိုအလျောက် ပြောင်းလဲ ပေးနိုင်သည်။
- မိမိ ရိုက်ထားသည့် စာ (သို့) ကူးယူထားသည့် စာကို ယူနီကုတ်နှင့် ဇော်ဂျီ နှစ်မျိုးစလုံး တွဲပြလိုက ပြနိုင်သည်။
- အကယ်၍ ကူးယူထားသော စာတွင် ယူနီ ဇော်ဂျီ နှစ်မျိုးလုံး ပါလာပါက တစ်မျိုးတည်းကိုသာ ရွေးပြပေးပါသည်။
- မိမိ ကူးယူထားသော မည်သည့် စာကိုမဆို သက်မှတ် အရေအတွက် မပြည့်မချင်း သိမ်းဆည်းပေးပါမည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အစောင် ၂၀ သိမ်းထားပေးမည်။ ထိန်းချုပ်ခန်းတွင် ၁၀ - ၅၀ ကြား ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ Copyboard တွင် ကြည့်ပါ။
- ထို ကူးယူထားသော စာများတွင်မှ နောင်အခါ ပြန်သုံးနိုင်ရန် စိတ်ကြိုက် ထပ်မံ သိမ်းယူထားနိုင်သည်။ အကန့်အသတ် မထားရှိပါ။ Snippet တွင် ကြည့်ပါ။
- ထိုအပြင် စာ၏ ခေါင်းစဉ်ကိုလည်း စိတ်ကြိုက် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
- Floating bubble အသုံးပြုလိုက Setting မှာ သွားရောက် ပြင်ဆင်နိုင်သည်။ Floating bubble ခွင့်ပြုထားလျှင် ကော်ပီ ကူးယူတိုင်း window တက်မလာတော့ဘဲ စခရင် မျက်နှာပြင် အနားတစ်ဖက်တွင် app icon သာ ပေါ်ထွက်လာမည်။ မိမိ ကြည့်ရှုလိုပါမှ ထို icon ကို ဖိနှိပ်လိုက်ပါ။ ထိုကြောင့် မလိုအပ်ဘဲ window များ တက်၍ နှောင့်ယှက်ခံရခြင်းမှ ကင်းဝေးနိုင်သည်။
- app ကို ဖွင့်နေစရာ မလိုဘဲ မိမိ ပြောင်းလိုသော စာကို တိုက်ရိုက် ပြောင်းနိုင်ခြင်း။ လုပ်ဆောင်မှုကို video clip တွင် ကြည့်ပါ။
for beta tester : https://goo.gl/dhLy3h Myanmar to use Unicode process came fromacorner somewhere dark Unicode messages on the Internet users to be able to see easily help fill.
Copy - have any message to any Unicode system orastandard that can be viewed with grammar.
- Changes ought to be taken automatically.
Copy the messages - or Unicode, and can be attached to both present.
- If you have copied the same if both present also selected.
- any copy will be stored until the full number of points. Typically, the blanket 20 will be stored. The controller can be set between 10 - 50. See Copyboard.
- The recording can be taken further in the future in order to reuse the custom. Weight is not limited. See Snippet.
- Floating bubble Setting can be prepared. Floating bubble allowed to copy the window on the other side of the edge of the screen instead of the app icon will appear. Would you like to see his icon is pressed the button. Therefore unnecessary window. Can be safe from being harassed.
- without having to open the app you want to change his message directly. Performance, see the video clip.
Download and install PK Converter version 2.001 on your Android device!
Android package: org.pikay.fontconverter, download PK Converter.apk
What are users saying about PK Converter
Zawgyi Uni Converter — Ko NyanFree App
NyaungU Converter — Htoo Aung HlaingFree App
U Zaw Converter — Kyaw HtutFree App
MM Font Converter — Myat Min SoeFree App
PL Converter — Sai Tawng PhaFree App